Ny fifanarahana BlackFriday tsara indrindra amin'ny eReaders, ebooks ary boky | Ireo mpamaky rehetra
Nacho Morato | | mpamaky
Efa fantatsika rehetra Zoma Mainty sy ny herinandro fivarotana adala mialoha. Tamin'ny taon-dasa dia namoaka tolotra izay heverinay fa mahaliana (mpamaky, ebooks ary boky) amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy na amin'ny alàlan'ny lahatsoratra iray. Saingy satria very izany rehetra izany, noheverinay fa amin'ity taona ity dia tsara kokoa ny mamorona lahatsoratra sy manavao azy mandritra ny herinandro, mba ho toerana fakan-kevitra hijerena ireo vaovao sy tolotra hitantsika.
Handeha izahay eReaders, ebooks, boky ary takelaka. Andao, na inona na inona hitantsika fa mahaliana eto dia avelantsika izany. Izay rehetra tia mamaky dia mety tiany. Raha hitanao ny momba ny tolotra iray dia azonao avela ho fanehoan-kevitra izany, azo antoka fa mpamaky maro no hankasitraka izany.
Mbola tsy betsaka. Fa tazomy ilay rohy izay havaozinay ka tsy maintsy tratranao ny tolotra tselatra 😉
miditra ity rohy hahita ny fifanarahana zoma mainty tsara indrindra amin'ny Kindle sy eReaders
1 EReaders Manolotra
2 Manolotra Takelaka
3 Manolotra ebook
3.1 Ebooks izay atolotray
4 Fifanarahana momba ny boky
Mandrehitra, izao misy hazavana ...
Tamin'ny taon-dasa dia nisy varotra lehibe tao amin'ny Kindle Paperwhite, amin'ity taona ity dia miandry isika. Amin'izao fotoana izao dia misy ny Tagus Iris
Kindle Paperwhite amin'ny € 99
Tagus Iris 2018 hatramin'ny 125,91 €
Tagus da Vinci 2018 hatramin'ny 190,71 €
Fire HD 8 takelaka nahena hatramin'ny 30 € ka hatramin'ny 70,99 €
Afo mirehitra 7 amin'ny € 49,99 20 fihenam-bidy.
Yunktab K 107 Takelaka 10 ″ (fihenam-bidy 50%) mijanona amin'ny € 50
Izy ireo dia tolotra ankapobeny izay ahafahanao mahita lohanteny be dia be ary mifidy raha tianao ny iray
Ebooks Amazon amin'ny 50%
Ebooks Amazon amin'ny teny anglisy 80% Raha mamaky amin'ny teny anglisy ianao dia misy ny varotra tena izy !!
Ary mijanona eo Flash Kindle
Manolotra hatramin'ny 80% ao amin'ny Trano Boky
Ebooks izay atolotray
Ity fizarana ity dia natokana hanoroana ireo ebook izay amidy ary tianay, fantatra tsara na niresaka tsara taminay ary heverinay ho fifampiraharahana ireo.
Fifanarahana momba ny boky
Manolotra hatramin'ny 72% ao amin'ny Trano Boky
Ampianaro izahay amin'ny famelana ireo tolotra mahaliana amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Fifampiraharahana Blackfriday amin'ny mpamaky, ebooks ary boky